Yini ongayibona e-Amman, inhlokodolobha yaseJordani | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Jordan, Yini ongayibona
IJordani ingelinye lamazwe ahambela kakhulu kule ngxenye yomhlaba futhi anobudlelwano obuhle ne-United States. Umbuso waseHashemite waseJordani usemaphethelweni oMfula iJordani futhi unqamula i-Iraq, iSaudi Arabia, i-Israel, iPalestine, uLwandle Olubomvu noLwandle Olufile ngakho-ke isendaweni enhle kakhulu yezindawo zomlando.
I-Amman iyinhloko-dolobha yaseJordani kanye nendlela yokungena kuleli lizwe abaningi ababelazi ngokubonakala okuhle kweNdlovukazi uRania kumagazini i-Hola! Idolobha elinenani elikhulu kakhulu lezakhamizi futhi uma ubheka iMiddle East likhululekile futhi lisentshonalanga impela. Ngakho-ke kungumuzi lapho izivakashi zakwamanye amazwe zizizwa zikhululekile khona. Namuhla sekube ngelinye lamadolobha ase-Arab avakashelwa kakhulu, ngakho-ke nansi konke ongakubona nokukwenza e-Amman.
2 Ukuvakasha kwe-Amman
I-Amman isesigodini futhi ekuqaleni yayakhiwe emagqumeni ayisikhombisa ngakho-ke amaphrofayili asezintabeni asabonakala Jabulela a Isimo sezulu esomile ngakho-ke nasentwasahlobo izinga lokushisa lisondele ku-30 ​​ºC. Ehlobo kuvamise ukushisa kanti ubusika buqala lapho kuphela uNovemba. Imvamisa kuyabanda futhi kungakhithika ngisho nasegagasini elibandayo.
Ama-42% wabantu baseJordanian ahlala lapha futhi kungabantu abanokufika okuningi. Kukhona inzalo yama-Arabhu namaPalestina futhi aqhubeka eza. Ingxenye enkulu yabantu bayo yiSini Muslim yingakho kunamaSulumane amaningi. Kukhona namaKrestu, yize beyingcosana. U-Amman kungumuzi wezakhiwo eziphansi, ngaphandle kwalesi sikhungo esakhiwe imibhoshongo ethile yesimanje nengilazi eningi. Izakhiwo zokuhlala azihlali ngaphezu kwezitezi ezine futhi zivame ukuba namabhalkhoni nemipheme.
Kunezitolo ezinkulu zasentshonalanga, izitolo, izindawo zokudlela nemigoqo kuyo yonke indawo kude kangaka ukuba yisayithi elilondolozayo.
I-Amman idolobha elinamakhulu eminyaka yomlando ngakho-ke inesahluko sangaphambi komlando, futhi isiGreki, isiRoma, i-Ottoman, ngisho neBrithani, yaze yathola inkululeko yayo. Inesistimu enhle yezokuthutha umphakathi, esanda kulungiswa, ngakho-ke ungahamba ngebhasi uma nje ufika kwesinye sezikhumulo sezindiza zomhlaba wonke. Indlela enkulu yedolobha inezizungeza eziyisishiyagalombili futhi noma ngabe isiminyaminya sinesiphithiphithi, ukuthola amabheringi wakho kulula.
Yikuphi ukuheha izivakashi e-Amman? Singakhuluma ngezinto ezibaluleke kakhulu, okuyizona okungafanele uziphuthe: iCitadel, inkundla yezemidlalo yaseRoma, indawo yokugeza yaseTurkey, isitolo sezinongo, iRoyal Automobile Museum, iJordanian Museum, i-Archaeological Museum kanye neGalari. de Bellas Artes, isibonelo. Ngaphezu kohambo losuku lapho siya khona okokuqala ePetra.
ICitadel ka-Amman Kusegqumeni oluphakeme kakhulu edolobheni, iJebel al-Qala'a, cishe ngamamitha ayi-850 wobude. Leli gquma selokhu kwahlalwa kulo kusukela ngeBronze Age kanti leli dolobha lizungezwe udonga olwakhiwe kaninginingi ngezikhathi ezahlukahlukene zomlando futhi lungamamitha ayi-1700 ubude. Ngaphakathi, okungafanele kuphuthelwe yi- Isigodlo se-Ummayad futhi i Ithempeli lika Hercules. Leli thempeli lakhiwa ngesikhathi sikaMarcus Aurelius futhi okusele kulo kwembula ukuthi kwakuyithempeli elihle kakhulu.
Isigodlo i-Umayyad siyisakhiwo sasebukhosini esasiyikhaya lombusi futhi sabhujiswa ukuzamazama komhlaba ngo-749 AD ukuze sihlale singamanxiwa. Ihholo elikhulu lezithameli elisesimweni sesiphambano nophahla oluhle olwakhiwe kabusha ngabavubukuli baseSpain lisahleli. I- emthonjeni ngesitebhisi sayo ezansi nekholomu elinganisa izinga lamanzi ne- Isonto laseByzantine kusukela ngekhulu lesi-15 ngamatshe alo. Kunemihlahlandlela yomsindo yokuvakashela yonke iCitadel, kwa-JD XNUMX ngehora.
El Inkundla yemidlalo yamaRoma Ibuyisiwe. Kuseceleni kwegquma futhi inamandla abantu abayizinkulungwane eziyisithupha. Kukholakala ukuthi yakhiwa ngekhulu lesibili futhi inendawo engcwele okwakukhona kuyo isithombe sika-Athena manje esiseNational Archaeological Museum. Ibuyiselwe ngasekupheleni kweminyaka yama-50s kepha azange zisetshenziswe izinto zoqobo ngakho akubukeki kahle kangako. Ukukhanya kwasekuseni kuhamba phambili ngokuthatha izithombe nokukhanya kwelanga, kuhle kakhulu.
Ukuphumula kancane singakwazi vakashela iBath yaseTurkey. Lapha abesifazane bageza ngakolunye uhlangothi nabesilisa kolunye. Kukhona ama-jacuzzi ashisayo noma afudumele kanye nama-sauna abanda kakhulu. Isipiliyoni sihle futhi siphumule kakhulu. Okunye okuhlangenwe nakho okuhle ukuthi vakashela isitolo sezinongo. Amakha ayamangalisa! Unganuka, unambithe futhi uthenge izinongo ezihlukile ozohamba nazo ekhaya. Ungazama futhi okumnandi Ikhofi laseJordani, khetha phakathi kweTurkey noma iSaudi, nambitha mezze, ama-appetizers noma i-tapas (i-falafel, i-hummus, i-tabbouleh, i-fattoush, iminqumo ...).
El Royal Museum of Imoto lembula umlando weJordani kusukela ngawo-20 kuze kube manje. Izimoto yilezo zamakhosi angaphambilini, kusukela enkosini u-Abdullah I, umsunguli wobukhosi, kuqhubeke. Kukhona iLincoln Capri yango-1952, i-Cord 810 yango-1936 kanye neMercedes Benz 300SL yango-1955. Izivakashi zikhokha i-JD 3 kanti nemnyuziyamu ivulwa nsuku zonke ngaphandle kwangoLwesibili, kusukela ngo-10 ekuseni kuye ku-7 ntambama, yize ehlobo iminyango ivalwa ngo-9 ebusuku.
Ngokwakhe i IJordanian Museum wembula umlando wamasiko wezwe ngamafa alo acebile. Kusenkabeni, eRas al-'Ayn futhi uma unesifiso sangaphambilini, samanje kanye nekusasa lalo Mbuso eMiddle East uyindawo ethokozisayo. Qaphela ukuthi ivalwa ngoMsombuluko. I- Isigcini Sokuvubukula Inamahholo okubukisa, ilabhorethri yokongiwa kwemvelo, imipheme eminingi nemibukiso yesikhashana nayo ebhekana namasiko, amagugu nomlando waleli zwe.
Ezinsukwini ezimbili noma ezintathu ungavakashela i-Amman kalula ujabulela ekuseni, ntambama nobusuku bayo. Kunezindawo zokudlela namaqembu okudansa, kunezindawo zokudlela neziphuzo ukuphumula, uphuze okuthile okusha futhi uzizwe uyingxenye yedolobha laseJordania isikhashana. Futhi-ke, uma kuyithuba lakho loku hlangana noPetra ngeke ungaphuthelwa: ukuvakasha kwangasese kuhlala cishe amahora ayi-10 futhi kusheshe kusheshe, ngo-7 ekuseni ePetra Kukubanga elingamakhilomitha angama-225 kusuka ku-Amman. Bala cishe ama- $ 200.
Uma ungahambi ohambweni ungagibela ibhasi uthenge ithikithi ePetra Visitor Centre eWadi Musa, idolobha eliseduzane namanxiwa, amakhilomitha amabili ukusuka lapho. Ufinyelela emanxiweni ngezinyawo noma ngehhashi unqamula izindonga zamatshe aphakeme, iSiq. Ithikithi losuku libiza i-90 JD futhi uma uhlala isikhathi eside, ubusuku obubodwa, kubiza ama-50 JD. Kunezindawo zokudlela kusayithi futhi ngomnyango bakunikeza imephu yokuthola yonke inkimbinkimbi. Impela ungaletha okwakho ukudla.
Uyafuna hlala ePetra ebusuku bese uqhubeka nokuvakasha ngakusasa? Unekhempu, i-Seven Wonders Bedouin Camp enemibhede evela kuma-euro angama-22 ubusuku ngabunye, i-Rocky Mountain Hotel enamakamelo kusuka ku-19, 44 euros ngesidlo sasekuseni sase-Arab ifakiwe noma i-Hotel Al Rashid, ngesidlo sasekuseni nomoya opholile namakamelo kusuka ku-16 ama-euro, isibonelo.
Njengoba ukwazi ukubona, ngaphansi kwesonto e-Amman uneposikhadi elihle elivela eJordani. Ngangeza izinsuku ezimbalwa e-spa osebeni loLwandle Olufile ukucula iLotto.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » Yini ongayibona e-Amman, inhlokodolobha yaseJordani